Full Press Statement from BAZ dismissing claims that Kwese TV has a valid broadcasting licence – Pindula News
Business	August 24, 2017
Full Press Statement from BAZ dismissing claims that Kwese TV has a valid broadcasting licence
The Broadcasting Authority of Zimbabwe wishes to advise the public that the Authority has not issued any licence for the provision of Kwese TV In Zimbabwe. This follows media reports suggesting that Kwese was now officially in Zimbabwe and did not need a licence after all. In terms of the Broadcasting Services Act [Chapter 1206J, no person shall provide a broadcasting service in Zimbabwe other than in accordance with a licence issued by the Broadcasting Authority of Zimbabwe. T. Content Distribution licence issued to Dr. Dish, which was specific to the provision of the My TV Africa Service, as declared by Dr. Dish in its application and stated in the terms and conditions of the licence, was cancelled by the Authority for failure by Dr. Dish to provide the My TV Africa service, The Broadcasting Authority of Zimbabwe therefore wishes to advise the public not to invest in a service that cannot be provided without a licence and warns anyone who may contemplate providing an unlicensed broadcasting service to acquaint themselves with the course of action that the Authority is bound to take, in terms of the law.
Kwese TVBroadcasting Authority of Zimbabwe
Kwese TV was a subscription-based Zimbabwean satellite and broadcasting network owned by Econet Wireless Zimbabwe, under Econet Media. The service was shut down formally on 1 November 2018. Customers that had bought the satellite could still watch Free to air content on their Kwese equipment... Read More About Kwese TV
Tagged: Broadcasting Authority of Zimbabwe Kwese Kwese TV
« Previous Electronic transactions surge from 900 000/month to 16 million/month: ZimSwitch
Next » ZimSwitch approaches RBZ to make it mandatory for all banks to be on ZIPIT as BancABC, StanChart and Barclays hold out